Boca Chica Beach oo ku taal Texas
Booqo gobolka Lone Star ee geeska ugu koonfureed ee ciidda
Dadka degaanka Texas iyo dadka soo booqanaya waxay sida caadiga ah ka ogaadaan xayndaabka baaxada leh ee xeebta ku yaala xeebta Padre Island National Seashore ee u dhow Corpus Christi . Kumanaanba waxay booqdaan xeebaha dekedda ee South Padre Island sannad kasta. Si kastaba ha noqotee, dad yar ayaa ka warqabta Boca Chica Beach, oo ah calaamad ciid ah oo ku taala waqooyiga Texas ee isku xirta tayada ugu fiican ee kuwa Gacanka Mexico ee caanka ah.
Boca Chica Beach oo ku taala bariga Brownsville ee ku taala xeebta xeebta ee Mexico ayaa ka soo jeeda Mexico iyadoo loo yaqaan 'Rivere Rivere River' oo ka soo jeeda Koonfur Padre Island oo ka timid Brazos Santiago Pass. Qeybo badan oo ka mid ah guryo ku yaal meel u dhow baaskiilka, kaas oo aad ka arki karto Jasiiradda Koonfureed ee Koonfur Padre, iyo xeebta u soo baxaysa Gacanka Mexico, ma helaysid wax horumar ah Boca Chica Beach. Maaddaama ay tahay xeebta koonfureed ee Texas, waxaad caadi ahaan ka heli doontaa boodh cagaaran oo nadiif ah, oo caddaadi ka soo horjeeda ciidda.
Farsamo ahaan qayb ka mid ah Gobollada Weyn ee Dooxada Dooxada Weyn ee Dabiiciga ah ee ay maamusho Adeegga Kalluunka & Duurjoogta ee Maraykanka, 8-mile xeebta Boca Chica waxay dabooshaa guryaha milixda, mangrove marshes, iyo dhoobo dhoobo loo yaqaan called lomas . Koofiyada Badda ee Kemp, oo ah duufkii ugu xumaa ee duufaanta adduunka ku yaala, ayaa ka imanaya xeebta oo ku yaal guga iyo xagaaga. Aplomado iyo falaqalladani waxay u guuraan aagga, iyo rooga, duufaanka, iyo shimbiraha kale ee dabiiciga ah ee soo noqnoqda.
Madadaalada iyo Biyaha Dhulka
Waxa Boca Chica ka maqan tahay waxyaabaha casriga ah, waxay ka kooban tahay waxqabadyo badan oo madadaalo ah, oo ay ku jiraan kalluumeysiga, dabaasha, surfing, snorkeling, kiteboarding, iyo birdwatching. Guryaha la'aanta waxaa loola jeedaa inaad keensatid dhamaan qalabkaaga gaarka ah ee wax walba oo aad rabto inaad raacdo, marka lagu daro biyo badan, cunto, muraayad qorraxda, kaneecada cayayaanka, qalabka gargaarka degdegga ah, iyo waxyaabo kale oo lagama maarmaanka u ah badbaadadaada iyo raaxo.
Iska ilaali ninka reer bortuqiis o 'dagaal, jilicsan oo jilicsan sida jilicsan oo xanaaqa xanuunka oo noqda mid baaxad leh ka dib dabaylaha.
Dadka degaanka ayaa ogaanaya meeshan, sidaas darteed waxay heli kartaa dad badan oo ka badan inta aad filan karto, gaar ahaan dhamaadka todobaadka. Soo qaado joonis si aad u fuliso qashinkaaga iyo wixii aad ka heleyso qof ka soo jeeda qoyskooda. Xeerarka magangelyada ayaa mamnuucaya cabitaanka khamriga iyo xayawaanka aan xayawaanka lahayn; Intaa ka sokow, dadka soo booqda waa inay iska ilaaliyaan quudinta duur joogta iyo ururinta ama si kale u dhibcoobaan dhirta iyo duur joogta.
Laga soo bilaabo Brownsville, qaado Wadada 4aad ee bariga ilaa 23 mayl ilaa ay ku dhimato-ciidda. Marka aad xeebta ku dhufatid, waxaad u tagi kartaa midigta afkiisa Rio Grande ama waxaad ku dari kartaa bidix iyo safar dhanka waqooyiga ah si toos ah uga soo jeeda Jasiiradda Koonfur Padre. Gawaarida ruqsadaha waddooyinka ah waxay ku socon karaan cammirka, laakiin magangelyo-sharciyadu si adag ayay u mamnuucayaan wadada kale. Xeebta waxay u furan tahay qorraxda rasmiga ah ee qorraxda rasmiga ah iyo gelitaanka bilaash; Kama bixi kartid ama haddii kaleba aad ku hoydaan hoygaaga.
Waxyaabaha la sameeyo ee ku yaala Texas Panhandle
Halka aad ka arki karto Bluebonnets Bloom ee Texas
Marathon Top Texas oo loogu tartamayo tartamada iyo tartamayaasha
Waxyaabaha Lagu Shaqeeyo ee Texas Inta lagu jiro bisha Oktoobar
Tiknoolajiyada Tikidhada Texas
Waxyaabaha loogu talagalay booqdayaashu inay ku sameeyaan Bariga Texas
Nevis waa Hot sida Hamilton, Wiilkeeda ugu caansan
Booqashada Sydney ee Fall
Magaalooyinka Posadas ee Mexico
Bandhigyada Los Angeles Baadhitaan LA LA by Land, Sea ama Air
7 Suxuuno Cuntada Mexico ah
Muuqaalada ugu fiican ee booqashada ku yaalla Guangzhou
Sidee looga fogaadaa dabagalaha dalxiisayaasha ee Whirf
11ka Meelood ee Meel Gaadhsiinta ee Degmada Orange
Waa maxay Autostrada Talyaaniga?
Bandhiga Ludwigsburg Pumpkin
Isticmaalka Isticmaalka StarHub ee kaadhka Dalxiiska ee Prepaid ee Singapore
Tilmaamaha Muhiimka ah ee Xadiiqada Buurta Qaranka ee Whiteface
METRO Light Rail ee Phoenix iyo Tempe
Booqashada tuulada Mysterious ee gobolka Aude